Famokarana Herinaratra : Afa-po amin’ny ezaka nataon’ny fitondrana ny SEFAFI -
AccueilSongandinaFamokarana Herinaratra : Afa-po amin’ny ezaka nataon’ny fitondrana ny SEFAFI
Famokarana Herinaratra : Afa-po amin’ny ezaka nataon’ny fitondrana ny SEFAFI
Nandritra ny fanambarany omaly dia nanaiky ny SEFAFi na nanao ezaka goavana amin’ny fampandrosoana ny fitondrana ankehitriny, indrindra ny lafin’ny angovo izay niainga tamin’ ny fanatsarana io lalàna io, ary ihany koa manoloana ireo asa vita. « Rehefa dinihina amin’ny saina tsy miangatra io lalàna mifehy ny angovo io dia hita fa raha mitaha amin’ny lalàna lah.98-032 dia mitondra fanavaozana amin’ny lafiny maro……Ny sori-dalana izay natao ho an’ny fifanarahana amin’ny Fitrandrahana sy ny Fahazoan-dalana dia nohamaivanina taty aoriana, mba hahatonga ny tsena hanintona kokoa ny mpampiasa vola. ». Raha atao tokoa mantsy ny fampitahana ny lalàna tany aloha sy ny ankehitriny dia olona 1,4 lavitrisa eto an-tany no voalaza fa tsy mahazo herinaratra, ka ny 7 amin’ny 10 dia aty Afrika atsimon’i Sahara. Anisan’izany ny 85 % ny Malagasy, satria 15 % ny tahan’ny fahazoana herinaratra, 11 % izy io tamin’ny 1998 talohan’ny fanalalahana ny sehatr’asa. Noho ny lalàna vaovao 2017-020 navoaka ny 10 aprily 2018, izay ny fitondrana ankehitriny no sahy nanao dingana goavana amin’ ny fanalalahana sy ny fampivoarana ny sehatry ny angovo tokoa mantsy, dia izao nidera ny ezaka vita izao ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin’ ny fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka.
Raha tsiahivina tokoa dia maro ireo fotodrafitrasa izay efa andalana ny fanombohan’ny asa sy ny fahavitany tahaka ny etsy Ambatolampy, izay nametrahana ireo takelaka hahazoana angovo avy amin’ ny masoandro miisa 75 000, izay hamokatra herinaratra 20 Mw hamatsy jiro an’Antananarivo, Vakinankaratra ary Moramanga. Hiompanan’ny ezaky ny fanjakana amin’ izao ihany koa ny angovo azo avy amin’ny tosiky ny rano tahaka ny any Volobe, izay hamokatra herinaratra 120 Mw. Hanomboka ny taona 2019 ny asa fanamboarana ary ho vita ny taona 2022, tsy hohadinoina ihany koa ny any Farahantsana izay hamokatra 22 Mw, izany hoe hamatsy jiro tokantrano hatrany amin’ ny 200 000. Anisan’ny goavana ihany koa raha mbola fotodrafitrasa notontosain’ny fanjakana ankehitriny ny any Belaoko Lokoha any amin’ ny faritra SAVA, izay ahazoana herinaratra 4,6 Mw ary tokantrano 350 000 no kendrena amin’ io tetikasa io. Ankoatra ireo moa dia mbola misy ny any Ranomafana, Ambodiraoka, Antetezambato ary ny any Sakaraha, izay efa ampiasain’ny mpoanina amin’ izao fotoana izao.
Rariny tokoa noho izany raha midera ny ezaka vitan’ny fanjakana foibe manoloana ny fahalanian’io lalàna vaovao mikasika ny herinaratra io ny SEFAFI, satria tanjona any amin’ ny 2030 ny hahazoan’ ny 70% ny tokantrano malagasy herinaratra. Ho an’ny ezaka atao amin’ ny fampidirana herinaratra any ambanivohitra kosa dia tanjona ny hahazoana 10% no mihoatra izany amin’ ny taona 2020. Miainga amin’ny fisian’ny herinaratra tokoa ny fampandrosoana, ary anton’ny niompanan’ny ezaky ny fitondram-panjakana tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fanatanterahana fotodrafitrasa mifandraika amin’izany. Rariny loatra ihany koa ny SEFAFI izay sata mpitondra tsikera raha midera ny ezaka vita satria dia azo tsapain-tanana avokoa izany asa izany. Ankoatra ireo herinanaratra azo avy amin’ ny angovo azo havaozina moa dia tsy azo hadinoina ny fisian’ny milina ahodina avy amin’ny menaka mavesatra, izay manena ny fandaniana ka ahafahana manatanteraka fotodrafitrasa hafa ny vola tombony azo avy amin’izany.
Nampiseho ny heriny ny UCTU sy ny mpitatitra manerana an’Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tamin’ny alalan’ny fanaovana fahirano ireo mpandeha, izay marihina tsara fa mpamelona ny mpitatitra. Marina tokoa fa nikorontana ny fiainan’ny vahoaka noho ...Tohiny
Nosy-Be : Hisitraka ivon-toeram-pamokarana herinaratra
Trafikana fitaovam-piadiana : Tra-tehaka ny basy poleta miisa 7